Makhe sithethe namhlanje ngeentwasahlobo ezizayo
Makhe sithethe namhlanje ngeentwasahlobo ezizayo. Ziziphi iinguqu kummandla wesimboli esinalo xesha elihle? Yintoni ekufuneka siyithenge ngo-Matshi? Le yimibuzo ebangela ukuba bonke abesifazana bathathwe ngelo xesha.
Ngoko ke, masithethe namhlanje malunga nentwasahlobo ezayo, malunga nemibala, iingubo kunye nezicathulo, eziya kuba zifunwa kwabasetyhini abashukumisayo. Eli xesha liza kulonwabela ukuthandwa kwemibala emininzi. Zombili zizintle, zi-chic zilula. Inkathazo yehlabathi ikwazi ukuchaphazela ubomi babasetyhini, kwaye baqalisa ukuchitha imali yabo.
I-Turquoise, ebomvu ebomvu, eluhlaza okwesibhakabhaka, i-beige, obomvu obomvu, ophuzi, i-coral, umbala we-champagne yepinki, yonke imibala eluhlaza ... Into ephambili ukuzama isitayela, ungesabi ukudibanisa imibala. Uhlobo luka-2010 lixesha lokubamba, ukuzithemba nokuzithemba.
Ngamnye ubuhle uyazi ukuba xa uzingela abathandekayo awukwazi ukwenza ngaphandle kwengubo . Le nto inombalo omnye kwiidrobhe. Ngoko ke sifanele sigqoke ngeli xesha? Sikhetha i-airy, iingubo eziluhlaza. I-chintz elula, i-silk okanye i-cambric iya kugxininisa ubufazi bakho nobuntu obuqaqambileyo. Entsha kweli xesha - iingubo ezinamahlombe amakhulu. Ukuba awuzange ugqoke iingubo ezinjalo ngaphambi okanye ucinge ukuba abayi kuhambelana nawe, ulahlekile! Ngokubambisana nezinto eziphathekayo, iimfono ezinamandla okanye kunye neentambo zesetyhini, amahlombe amancinane aya kuba yisigqibo esiphumelelayo. Lawa mahlombe amhlophe aya kubakho kwiingqungquthela, iebhatyi kunye neebhola. I-Strasses kunye neetyathanga zazo zonke iintlobo zeepateni aziyi kuphuma ngefashini. Iskimu sombala weengubo zentwasahlobo ka-2010 sinokubonakala sisithintele. I-Beige okanye ipayipi, emnyama okanye emhlophe imhlophe iya kukuhlobisa ngeli xesha.
Ihlala ifuna ukujonga indlela yokugqoka. Umkhangeli walo nyaka uya kuthathwa njengengubo encinane kwimibala yensimbi, kunye neengubo ezinemizila engqongqo kunye nemigca engagqibekanga. Konke kwimoyiyo kuya kuhlala iingubo, eziye zenzelwe ukudala umfanekiso wesithandane - ukugqoka kwindlobo emide eminqubeni emva. Akukho nto ingabonakalisa ubabalo lwakho nobabalo ngaphezu kwesi sigqoko.
Abaninzi abaklami baphikisa ukuba entwasahlobo ka-2010 abafazi befestile baya kukhetha iingubo ezide, kwaye kungekhona mini. Siza kubona. Ukususela kuma-80 ans, iingubo ezinamaqhina kunye nezoboya zibuyele kuthi. Iindwendwe ezidumiweyo sele zilungiselele ukuqokelela kwazo kule ndlela.
Ngoku ngexesha elifanelekileyo lokuthatha isigqibo malunga nokukhethwa kwezicathulo, ngenxa yokugqoka iifashini - iyisiqingatha kwimeko.
Ewe, izicathulo zakudala! Ngokuqinisekileyo yindlela yokuphumelela. Kodwa ukubetha kwangempela kwenkathi yimiqathango yezicathulo kwiqonga. Iminyaka embalwa eyadlulayo kwakungekho kwimoya, kodwa wathembisa ukubuyela, kwaye njengoko sibonayo, ayizange isikhohlise. Izicathulo, iibhothi, izicathulo kwiqonga - ngumhlobo obalulekileyo kubasetyhini obuphakamileyo, uzinzile, kwaye kubaluleke kakhulu, inyawo kwizicathulo kwiqonga likhangele zonke izinto ezintle kwaye zikhohlise njengoko zikwezinwele. Ngalesi sihlandlo kunye nezicathulo ezijikeleziwe okanye ngokubanzi zivuliwe. Ngokufashisa kwakhona kubuyisela izicathulo kwiimbambo kunye nemicu, kunye kunye neplatifti - oku kutshatyalaliswa ngokwenene kunye nerekhodi yazo zonke izinto ezithengiswayo nezingenakucingelwa.
Ukuba ukhetha isitayela sezemidlalo kwaye ufuna ukuba iinyawo zakho zigijime phambili emoyeni, ngoko uya kuba namathanga. Baya kuba yiklasi okanye imodeli. Ukuba ukhetha okokugqibela, zizithenge i-ultraviolet okanye eluhlaza. IiKeds sele zibe ngumqondiso wexesha lobutsha. Ngonyaka ngamnye, inani lemisebenzi yabo landa. Ngoku akusiyo kuphela izicathulo zemidlalo, kodwa kwakhona indlela yokukhanyisa kumashishini amasha kwi-party.
Okukhethiweyo kungokwakho: kusele kuphela ukugqiba indlela ofuna ukujonga ngayo le ntwasahlobo, fumana isitayela sakho kwaye uye kwiivenkile uhlaziywe ikhabethe lakho. Khumbula ukuba intwasahlobo yinkathi enkulu yokuqala ubomi obutsha kwaye ibe yinto enhle.
Ukuzingela ngefestile: i-safari - indlela entsha yexesha lehlobo-ngo-2016
I-Spring kwi-azhure: ijeyeri yeboya njengendlela entsha
Izitayela zokudubula isithombe kwis studio: ezikhethwa kakhulu
Izambatho zentshintshi zasehlobo ezivela kubakhi befashini
Ubuthathaka bemisipha yomgangatho weplavic
Iikhukhi ezivela kwii-potato chips
Izibonelelo zolwandle lwamanzi ityuwa kubantu
Umnqweno womfazi ukuba ngumntu
Ukupheka kwezitya ezidliwayo zangaphambili
I-Nutrigenomics: indlela entsha yobuhle kunye nempilo
Ingulube ephekiweyo yindiza kunye neengcambu zengcambu ezibhaka
Iingcweti zezingane ezenziwe ngama-acorns kwimixholo ethi "I-autumn": iiklasi zeeklasi kunye neziteyathelo zenyathelo-nge-nyathelo
I-Minodière: i-accessory ongenakuyenza ngaphandle ko-2016
Ii-tartlets ze-almond kunye nama-raspberries kunye necolethi emhlophe